‘China New York Times’? Tonga Soa Amin’ny Nofinofin’Ilay Mpanakarembe Chen Guangbiao · Global Voices teny Malagasy
‘China New York Times'? Tonga Soa Amin'ny Nofinofin'Ilay Mpanakarembe Chen Guangbiao
Voadika ny 08 Janoary 2014 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, বাংলা, srpski, English
Nanambara tamin'ny 31 desambra 2013 ilay Shinoa miliaridera, izay mirona kokoa ho amin'ny fanaovana asasoa amin'ny sehatry ny tantara tsangana, Chen Guangbiao, fa mikasa ny hividy ny New York Times mandritra ny dia taombaovao hotanterahany any Etazonia, na dia eo aza ny fitsipahana avy amin'ny mpamoaka boky aman-gazety ny famarotana azy.
Nanoratra tao amin'ny gazety shinoa tia manaitaitra Global Times ilay miliaridera fa tiany hividianana ny New York Times ny tahiry azony nandritra ny fiainana ary hohavaoziny amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitokisana ny zavatra soratany sy ny tsy fitongilanany rehefa mamoaka vaovao ilay gazety raha vantany feno ny fahazoany azy.
Noho ny fitiavany misehoseho amin'ny olona, toy ny fizarana vola taratasy 100 yuan (tokotokony ho $16 etazonia) teny an-dalamben'i Beijing, na ny famarotany rivotra an-kapoaka mba hividianana ny vondro-nosy Diaoyu, dia mahita ity fihetsika ity ho mitovitovy amin'izany ihany ny ankamaroan'ny Shinoa
Mpanao sariitatra D.S.X namoaka sary an'esoeson'i Chen Guangbiao's attempt to acquire the giant media corporation.
Raha ny marina, hita fa tsy tena mpanankohariana loatra ho afa-manao fifampiraharahana araka izay tadiaviny i Chen. Amin'izao fotoana izao ny haren'i Chen dia mitentina iray miliara yuan (manodidina ny 16 tapitrisa dolaran'i Etazonia), nefa ny sandan'ny New York Times eo an-tsena dia 2,4 miliara dolara. Rehefa sehatry ny resaka ara-bola i Chen dia mamaly amin'ilay fombany tia sehoseho iny fa tsy ampy hividianana ny gazety ny vola, saingy mety ho afa-mividy pejy iray izy [zh] izay tiany petahana hoe “China New York Times” eo amin'ny fanambonin'ny pejy.
Rehefa nody an-tanindrazana izy dia nifananihany momba izay ijoroan'i Chen ny mpisera Shinoa ka nanolo-kevitra azy hividy gazety ao an-toerana, tahaka ny People's Daily [gazetim-Bahoaka] ohatra na ny Global Times [Fotoana Ankapobeny].
Ao amin'ny Sina Weibo, tranonkalam-pamahanam-bilaogy fohy malaza ao Shina i Siling Ben, izay mpanakanto, nampivoitra fa ny zava-panaon'i Chen izao no ohatra ratsy amin'ny fihetsika tsy mety ataon'ny mpanankarena vaovao ao Shina:
Nitabataba aok'izany i Chen Guangbiao dia nisidina nankany Etazonia. Toetrany mihitsy ny fanintona-maso tahaka izany. Izany no hanihanin'ny Taomabaovao. Tsy namoaka hevitra na inona na inona momba ny tsaho ny New York Times. Tahaka ny felaka tehamaina tamin'ny tarehiny izany. Rehefa tsy afa-miaramiaina amin'izao tontolo izao ny firenena iray eo amin'ny soatoavina fototra sasantsasany sady mampandroso ny resaka mahaolona eo amin'ny vahoakany, tsy misy dikany izay haren'ilay firenena, tsy hahazo ny fanajan'ny hafa eo amin'ny sehatra manerantany ny fihetsika [ny didin'ny] jiolahimboto sy misehoseho ho tsy refesi-mandidy.
Ny mpisera Weibo “Orsa lehibe” nanao fanehoan-kevitra mitovy amin'izany fa amin'ny filantom-peo tony kokoa:
Nanao asam-panasoavana maro i Chen Guangbiao, fanaja izany. Saingy tsy tokony ho saron'ny tsy fahalalàna izany falalahan-tanana izany, raha tsy manana finoan'ny fahafahana Amerikana moa ny New York Times dia mbola ho New York Times ihany ve?
Mpisera Weibo monina ao Shanghai antsoina hoe Chen Jinguo namoaka indray ny resadresaka noforonin'ny eritreritra teo amin'i Chen Guangbiao sy ny tompon'ny New York Times:
Nanomboka tamin'ny fahatongavan'i Chen Guangbiao tao New York City ny tantara, ary nanomboka ny adi-varotra teo amin'ny tompon'ny New York Times sy i Chen. F: “Inona ny fandraharahana tena ataonao?” V: “Fanodinana ho vaovao na varahina, na vy na taratasy, izay rehetra azo ampiasaina indray.” F: “Nahoana no tianao hovidiana ny New York Times?” V: “Manodina taratasy ihany koa aho!” [efa haintsika angamba fa ny paper dia mety ho sady midika ho taratasy no midika ho gazety amin'ny teny anglisy]
Ny mpanao tsikeran-tsarimihetsika Zhou Liming nanolo-kevitra an'i Chen hividy ny Trano Fotsy:
Faniriako ny Rahalahy Biao hividy ny Trano Fotsy fa tsy izany. Avy eo dia afa-mibaiko ny olony izy hijoro eo am-bavahady sy hivarotra tapakila ho famenoana ny lany. Kely fahazoana tombony ny fividianana ny New York Times.